Marka Bowden oo sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dib u celinta barakacayaasha ku sugan Muqdisho – Radio Daljir
Febraayo 13, 2012 12:00 b 0
Mogadishu, Feb 13 – Xiriiriyaha QM ee arimaha garaagrka Soomaaliya Mark Bowden ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho oo ay ku suganyihiin boqolaal dadwayne oo kasoo baracay gobolada Jubooyinka,Bay,Bakool iyo Gedo.
Mark Bowden ayaa waxaa kusoo dhoweeyay magaalada Muqdisho masuuliyiin katirsan dowladda faderaalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdisamad Macalin Maxamuud oo uu sidoo kale la yeeshay kulan kusaabsan arimaha gargaarka iyo dadkii kasoo barakacay abaarihii ku dhuftay gobolada dalka qaarkood.
Xiriiriyaha Gargaarka banii’aadanimada QM ee Somaliya Mark Bowden ayaa shir jara’id uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxaa uu ku sheegay wasiirka arimaha gudaha dowladda KMG Soomaliya inay ka wada hadleen sidii dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Muqdisho dib loogu celin lahaa deegaanadii ay ka yimaadeen,iyadoo sidoo kale QM ay bixinayso dhaqaallaha ay dib ugu laaban doonaan goboladii ay kasoo barakaceen.
“Tirada aanu ku qiysaasayno dadka barakacayaasha ee xiligaan ku sugan Muqdisho waa laba boqol oo kun barakacayaal ah,waxyaabaaha aan xiligaan aan wadno ayaa ah sidii dadkaasi dib loo celin lahaa”ayuu yiri Mark Bowden.
Arintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dadkii kasoo barakacay abaarahii ka jiray gobolada Soomaliya qaarkood ay bilaabeen inay dib ugu noqdaan gobolada ay horay uga soo barakaceen oo xiligaan roobab badan ay ka da’een.
Wasiirka arimaha gudaha ee wadanka Uganda iyo wafdi uu hogaaminayo oo Muqdisho kula kulmay madax katirsan dowladda Soomaliya.
Baahin: Axad, Feb 12, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Xulka gobolka Nugaal oo qaaday horyaalka ciyaaraha gobollada Puntland 2012; Juxa, wasiirka waxbarashada ee Puntland oo dhaliilay maaraynta & qaybinta deeqaha waxbarasho ee dawlada federaalka; M/weyne Shariif oo sheegay in ay Al-shabaab ka xorayn doonaan gobollada dalka oo dhan.